स्थापाना कालदेखि हालसम्म आईपरेका ने.क.पा.का गहन संकटहरु : ओम हमाल – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ मंसिर ८, आईतवार) १३:४९
बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आज छैठौं स्थापना दिवस मनाइरहेको छ। स्थापनाको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि क्रान्तिले खासै तीब्रता दिन नसकिरहेको भन्दै सबैतिर टिप्पणी भैरहंदा भने सरकारले बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.लाई सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिएको छ। त्यही भएर सरकारले गएको फागुन २८ गतेदेखि बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.लाई प्रतिबन्ध लगाएको छ र उसका नेता, कार्यकर्ता, सुभेच्छुक समेतलाई पक्राउ गरेर बिभिनन झुठ्ठा मुद्दा लगाउदै थकाउने र आत्मसमर्पण गराउने नीति लिएको छ। यही प्रतिबन्धको आठ महिने अवधिमा पांच सय ९६ जनाले पार्टी छाडेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
पार्टी प्रतिबन्धपछि ने.क.पा.लाई पुगेको क्षति
पार्टी प्रतिबन्धको ८ महिनामा ने.क.पा.को केन्द्रदेखि जिल्लास्तरीय पदाधिकारी तहका ७२ सहित १ हजार १ सय ५० नेता–कार्यकर्ता समातिइसकेका छन् । यस बीचमा पार्टी सचिवालयकै हेमन्तप्रकाश वली, चन्द्रबहादुर चन्द (वीरजंग), भरत वम, माइला लामा, वसन्त श्रेष्ठ, नविन विश्वकर्मा, बन्धु चन्दलगायतका केन्द्रीय नेता पक्राउ परेका छन्। दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष डम्बर विक, युवा संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष बबिल केसी, नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष बन्धु चन्द, महासचिव धीरेन्द्रा उपाध्यायलगायतका केन्द्रीय सदस्य पक्राउ परेका छन् ।
२८ फागुन २०७५ मा सरकारले विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। त्यसयता मात्रै ८ जना नेताकार्यकर्ता मारिइसकेका छन्। सोलखुम्बूमा उसका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे, सर्लाहीमा जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल र भोजपुरमा ओखलढुंगा सेक्रेटरी नीरकुमार राई गरी ३ जना प्रहरी कारवाहीमा मारिएका छन्। काठमाडौंमा ४, कैलालीमा १ जना भने आफैंले बोकेको बम विस्फोट भई मरेका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ने.क.पा. वाट एम–१६, एसएमजी, एलएमजी, एसएलआरसहित ४१ थान शक्तिशाली हतियार र १ हजार २ सय ५६ राउन्ड गोली बरामद गरेको जनाएका छन् ।
त्यतिले मात्र नभई सरकारले पक्राउ गर्न थालेपछि ने.क.पा.का कतिपय नेता–कार्यकता अर्को राजनीतिक दलमा प्रवेश गरिरहेका छन् । ०७६ जेठ १९ मा पोलिटब्युरो सदस्य तथा तात्कालीन केन्द्रिय जनसरकारका उपप्रमुख एबम पूर्वराज्यमन्त्री पदम राई सत्तारूढ नेकपामा प्रवेश गरेका छन् । अर्का पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण धमला ‘गम्भीर’लाई पार्टीले कारवाही गरेपछि उनले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै अर्का पोलिटब्युरो सदस्य एबम जनवर्गीय संगठनका प्रमुख मोहन कार्की ‘जीवन्त’लाई पार्टीले कारवाही गरेपछि उनी निष्क्रिय छन्। उनले पार्टीको कार्यदिशाप्रति गम्भीर असहमति जनाउदै आएका छन्।
सरकारलाई चुनौती बन्दै ने.क.पा.
सरकारले यतिबिघ्न दमन गर्दा पनि बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. अझै प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकदेखि सुरक्षा निकायका आन्तरिक रिपोर्टमा विप्लवका गतिविधि आन्तरिक चुनौतिका रूपमा अथ्र्याइएको छ।
पार्टी पुनर्गठनको पूर्वसन्ध्यामा विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.ले जारी गरेको सार्वजनिक अपिलमा विपद झेल्ने तर धोका नदिने उल्लेख छ। ‘पार्टी स्थापना दिवस विगतको भन्दा फरक जीवनमा उभिएर अर्थात् प्रतिबन्ध र प्रतिरोध, उत्साह र गम्भीरता, गौरव र पीडा, बलिदान र प्रतिबद्धतासहित मनाउँदैछौं।’ अपिलमा उल्लेख छ, ‘हाम्रो बलियो प्रतिबद्धता छ– विपद् झेल्न तयार छौं तर जनता र देशलाई धोका दिन चाहन्नौँ।’
ने.क.पा.का कमजोर पक्षहरु
सरकारसंग आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि यस पार्टी बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको अनुभुति सर्वसाधारणहरुले गर्न थालेका छन्।
एकातिर पार्टीले कारवाही गरेपछि पार्टी परित्याग गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पार्टीको कार्यदिशा नै गलत भएको भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। पार्टीभित्र रहेका र अन्तरसंघर्ष गरिरहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु जनवादी केन्द्रीयताका नाममा इमान्दार र लगनशील अनि कर्मठ कार्यकर्ताहरुमाथि थिचोमिचो हुने गरेको गुनासो एक आपसमा गरिरहेका छन्। पार्टीको नेतृत्वलाई सलामी, गुलामी, हरामी, दलाली र चाप्लुसी गरेर रिझाएका केही गलत तत्वले इमान्दार, लगनशील र कर्मठ नेता तथा कार्यकर्तालाई दमन गर्दै टाउको ठड्याउन नदिएको पिडितहरुको गुनासो छ।
अरु पार्टीबाट पार्टी प्रवेश गरी मौकाको खोजी गरिरहेका मौकापरस्त केही नेता तथा कार्यकर्ता आफु सक्दो कमाएर पार्टी छाड्ने गरेको पनि पार्टीभित्र चर्चाको बिषय बन्ने गरेको छ। मौकाको खोजी गर्दै पार्टी प्रवेश गरेका र आफुलाई प्रतिकुल अवस्था देख्नासाथ पार्टी परित्याग गरिरहेका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीबिरुद्ध सुराकी गरिरहेको बेला बेलामा चर्चा हुने गरेको छ। त्यसमा पनि विभिन्न बहानामा पार्टीभित्र प्रवेश गरी राम्रै पहुँचमा रहेका केही नेताहरुले आफ्नै पार्टीविरुद्ध सुराकी गरिरहेको निष्कर्ष ने.क.पा.को छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण काभ्रेबात स्थायी कमिटि सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहित नौजनाको टोली, दाङबाट पार्टीका मध्यपश्चिम कमाण्ड इन्चार्ज बीरजंगसहित २२ जना र कास्कीको घान्दृकबाट जिल्ला सेक्रेटरी आक्रोशसहित २१ जनाको सामुहिक गिरफ्तारीलाई लिने गरिएको छ। यस्तै पार्टीभित्रको आन्तरिक सुचना चुहावटकाकारण बेला बेलामा केन्द्रिय नेताहरु समेत गिरफ्तारीमा पर्ने गरेका छन्। त्यसमा पनि गिरफ़्तारॆएमा परेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले प्रहरी प्रशासनसंग सुचना चुहावट गर्ने गरेकाकारण पनि ने.क.पा.भित्र ठुलो समस्या देखिएको छ।
विभिन्न घात र अन्तरघातकाकारण पार्टीका सम्पूर्ण दस्ताबेजहरु सरकारसंग पुगेका छन्। यतिबेला पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले देख्नसम्म नपाएका पार्टीका महत्वपुर्ण दस्ताबेजहरु सरकारसंग रहेको छ। सरकारले बेला बेलामा गिरफ्तार गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट त्यस्ता दस्ताबेजहरु हात पारेको हो। जसकाकारण सरकार बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.संग वार्ता गर्नभन्दा पनि दमन लागि परेको छ।
विभिन्न कार्य योजना बनाएर कार्यान्बयन गर्न फिल्डमा उत्रिएको बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.का प्रवक्ता खड्गबहादुर बिस्वकर्मा पोहोर साल भक्तपुरबाट गिरफ्तार हुँदा उनीसंगै रहेको पार्टीका सम्पूर्ण दस्ताबेज र कार्ययोजनासहितको ३२ जीवीको पेनड्राइभलाई प्रहरीले हात पारेको थियो। त्यही पेनड्राइभ र प्रवक्ता प्रकान्डसंग समातिएका अन्य दस्ताबेजहरुकाकारण सरकारले बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.लाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको बताइने गरेको छ।
आफ्ना सम्पूर्ण कार्ययोजना र दस्ताबेजहरु सरकारले हात पारेपछि फेरी एकत्रित भएर नया कार्ययोजना बनाई कार्यान्बयन गर्न लैजान नपाउंदै अर्का स्थायी कमिटि सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन’सहित नौजना केन्द्रीयस्तरका नेताहरु काभ्रेबाट गिरफ्तार भएका थिए। उनीहरुसंगबाट सबै कार्ययोजनासहितको दस्ताबेजहरु प्रहरीले बरामद गरेको बताइएको छ।
यसरी पटक पटक आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता गिरफ्तार हुने र पार्टीका सम्पूर्ण कार्ययोजनासहितका दस्ताबेज सरकारसम्म पुग्ने गरेपछि पछिल्लो पटक ने.क.पा.ले १७ जना केन्द्रिय सदस्यलाई विभिन्न बहानामा कारवाही गरी नया कार्य योजना तयार गरेको थियो। तर त्यो कार्ययोजना पनि पार्टीका केन्द्रिय सदस्यले समेत देख्न नपाउदै दाङमा बसेको राप्ती ब्युरो बैठकस्थलबाट गिरफ्तार गरिएका मध्यपश्चिम कमाण्ड इन्चार्ज बीरजंग समेतको टोलीबाट प्रहरीले बरामद गरेको बताइएको छ।
प्रहरीले बरामद गरेको पछिल्लो दस्ताबेजमा आसन्न उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्नेदेखि देशका ठुलाठुला दलाल र भ्रस्ताचारीहरुलाई कारवाही गर्नेसम्मको कार्य योजना रहेको बताइन्छ। यस्तो महत्वपुर्ण कार्ययोजनासहितको दस्ताबेज पनि सरकारको हातमा पुगेपछि बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.मा अर्को ठुलो नैतिक संकट आईपरेको अनुमान गरिएको छ। यस संकट टार्न ने.क.पा.लाई अझै केही समय लाग्न सक्ने र नया कार्ययोजना बनाउन पनि निकै कठिन हुने आंकलन गरिएको छ।
ने.क.पा.को कमजोरी सच्याउने प्रयास
केन्द्रीयस्तरका नेताहरू पक्राउ पर्न थालेपछि महासचिव बिप्लव स्थायी समिति र पोलिटब्युरो नै भंग गरेका छन् । त्यसको ठाउँमा पछिल्लो पटक ५ सदस्यीय सचिवालय र ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरिएको छ । सचिवालय सदस्य वलीले पुर्पक्षका क्रममा नख्खु जेलमा छन् । आठौं विस्तारित बैठकबाट केन्द्रीय सदस्यमा चुनिएका ४ जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । महासचिव बिप्लव सहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, सन्तोष बुढा र धर्मेन्द्र बाँस्तोला प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । बुढा नेकपा पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज हुन् । स्थायी समिति सदस्य वली पक्राउ परेपछि मध्य कमान्ड प्रवक्ता विश्वकर्माले नै लिएका छन् । पश्चिम कमान्ड इन्चार्ज बाँस्तोला हुन् ।
ने.क.पा.को गम्भीर त्रुटि
सही बिचार-सिद्धान्त, संगठन र कार्यकर्ता भयो भने क्रान्ति अघि बढ्न सम्भव हुन्छ। एउटा क्रान्ति सम्पन्न गर्न रास्ट्रिय तथा अन्तररास्ट्रिय परिस्थिति अनुकुल हुन त आवस्यक छ नै, त्यसमा पनि मुलुकभित्र बैधानिक र अबैधानिक दुवै खालका संघर्षलाई जारी राख्नुपर्छ।
बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.को बिचार- सिद्धान्त र कार्यदिशा गलत भएको भनेर पार्टी छाडी हिडेका केही नेताहरुले भन्ने गरेका छन्। त्यो सही हुन पनि सक्छ र गलत पनि। तर पार्टीले यति बिघ्न समस्या र संकटहरु आइपरेको अवस्थामा यिनका कुराहरु एक पटक सुनुवाई पो गर्ने हो कि ? जे गर्ला त्यो ने.क.पा.को नेतृत्वले गर्ला।
अर्को कुरा नेपालमा क्रान्ति अघि बढाउने कुरामा कसैको दुई मत रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चौतर्फी सिमा मिचिएको अवस्था, सामाजिक दलाल पुजीवादीहरुको पकडमा नेपाली सत्ता पुगेको परिस्थिति, मुलुकमा निगम पुँजीवादले सर्वसाधारण जनता, किसान, मजदुर लगायतलाई मरणासन्न पार्न लागेको अवस्था, बिदेशमा देश तथा अमेरिकी तथा भारतीय साम्राज्यबादबिरुद्धका आवाजहरु, सिरिया संकट जस्ता बिषयहरुलाई केलाएर हेर्दा नेपालमा क्रान्ति आवस्यक देखिन्छ नै।
नेपालमा क्रान्ति आवस्यक छ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला। तर संघर्ष गर्ने कुराम बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. चुकेको छ। ने.क.पा.ले बैधानिक संघर्षलाई भन्दा अबैधानिक संघर्षलाई बढी जोड दिएको जस्तो देखिएको छ। ने.क.पा.ले बैकल्पिक सत्ता निरमान गर्ने क्रममा जनसत्ता, जनअदालत र जनसेना त निर्माण गरिरहेको छ। तर सरकारी सत्ताभित्र रहेका असन्तुष्ट र मध्यम वर्गलाई समेट्न ने.क.पा.ले बैधानिक संघर्षलाई अघि बधाउन सकेको छैन। फलस्वरूप सरकारले ने.क.पा.को यही कमजोरीलाई ने.क.पा. समाप्त गर्ने कडीको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
ने.क.पा.ले बैधानिक मोर्चा निर्माण नगरेको अवस्थामा उसका सबै भात्री संगठनमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीको कार्यकर्ताका रुपमा सरकारले अर्थ्याएको छ। जसकाकारण ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्ता गिरफ्तार भएका छन् नै, उसका सुभेछुकहरुलाई समेत गिरफ्तार गरेर सरकारले हायलकायल पारेको अवस्था छ। उसको ठुलो अर्को समस्या के पनि देखिएको छ भने जनवर्गीय संगठनमा रहेका सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी कमिटीमा राख्ने गरेको छ। जसले गर्दा एक कार्यकर्ता पक्राउ पर्दा उसको कमजोरीका कारण अधिकांश कार्यकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ।
विगतको दश बर्षे जनयुद्ध कालमा पार्टीका जनवर्गीय संगठन र भात्री संगठनहरुलाई सरकारी निकायमा दर्ता गरिएको हुन्थ्यो। खुल्ला मोर्चाका रुपमा विभिन्न बुद्धिजीवी , पत्रकार र मानव अधिकारवादी संगठनहरु परिचालित हुन्थे। तर अहिले नेपालमा जारी रहेको क्रान्तिमा यी बाटाहरु अपनाइएका छैनन्। यही कारण ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्ताहरु गिरफ्तार हुँदा वा मारिंदा आवाज उठाउने संघ-संस्था बिरलै देखिन्छन। बिगतमा पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता केही हुनासाथ भात्री संगठन, जनवर्गीय संगठन र खुल्ला मोर्चाहरु बोल्ने गर्दथे। सबै पत्रकार र संचार माध्यमहरु सरकारको गलत कामको खुलेर चर्को रुपमा बिरोध गर्दथे।
अहिलेको अवस्थामा ने.क.पा.को संचार माध्यम सम्बन्धि स्पस्ट धारणा रहेको देखिदैन भने त्यहाँभित्र दक्ष र योग्य संचारकर्मीहरुको संख्या न्यून छ। अझ स्पस्ट रुपमा भन्नु पर्दा ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्ताको संचार माध्यमसम्म पहुँच नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। बिस्वासको कमी, सुरक्षाको कारण देखाउंदै ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्ताहरु संचार माध्यमसंग जोडिन चाहदैनन्। जब पार्टीकाबिरुद्ध समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण हुन्छ, तब मात्र ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्ताहरु संचार माध्यमको समपर्क खोज्दछन। पार्टी र संघर्षमा अति उपयोगी हुने तर आत्मघाती सामाजिक संजालाहरुमा ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्ताहरुको कमी चासो देखिन्छ। जुन उपयोगले आधा युद्ध लडेको महशुस हुन्सक्छा।
ने.क.पा.को हालको संघर्षको स्वरुप
मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था रहेपनि यो व्यवस्थाले जनता र मुलुकका समस्याहरु वैज्ञानिक तवरले समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.ले यस व्यवस्थालाई दलाल संसदीय ब्यबस्था भन्दै यसविरुद्ध हिंसात्मक संघर्षमा जोड दिइरहेको छ।
गाँउ र सहर दुवै नछाड्ने, मध्यम वर्गलाई पनि साथ लिने र सहरी जनविद्रोहका माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने रणनीतिका साथ विप्लवले अहिले भूमिगत शैलीमा पार्टी गतिविधि अघि बढाएको छ।
२०७१ सालमा तत्कालीन मोहन वैद्य (किरण), रामबहादुर थापा (बादल) लगायत नेता रहेको पार्टीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै विप्लव स्वयंको नेतृत्वमा यो पार्टी जन्मिएको थियो। सुरुमा नेकपा माओवादीका नाममा पार्टी गतिविधि अगाडि बढाएको उसले ०७३ फागुनको महाधिवेशनपछि भने नेकपाको नाममा क्रियाकलाप गर्न थालेको हो। उसले वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने कार्यनीतिका रुपमा ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ अघि सारेको छ।
तर एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यक्रम र फौजी कार्यदिशा कस्तो हुन्छ ? अझै विप्लवले यसबारे सविस्तार बताएका छैनन्। तर आवश्यक परे दलाल संसदीय ब्यबस्था र तिनका मतियारहरु बिरुद्ध लड्नका लागि भन्दै सैन्य संरचना निर्माण गरिरहेको छ।
सेना, प्रहरीसँग तत्काल जुध्ने पार्टीको नीति नभएको पनि बताउने तर राज्यका ‘अवयव’माथि धावा बोल्न पनि नछाड्ने नीति विप्लवको पार्टीले लिइरहेको छ। स्थानीय तहका वडा र गाउँपालिकाका कार्यालयमा आगजानी, आक्रमण, एनसेलमा आक्रमण, जनप्रतिनिधिले चढ्ने गाडीमा आक्रमण विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पछिल्ला दिनमा गरेका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। यसभन्दा अघि बढेर पार्टीले थप कुनै ठूला आक्रमण भने अहिलेसम्म गरेको छैन।
वार्ताका लागि सरकारको इमान्दारिताको खोजी
विप्लवको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ताका लागि सरकारले पत्र पठाए र बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहाइ गरेमा वार्ताका लागि तयार रहने निर्णय गरेको थियो।
विप्लवले नै जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले इमान्दारीपूर्वक पहल गरे वार्तामा बस्न सकिने पार्टी निर्णय सार्वजनिक भएको छ। तर सरकारले अहिले विप्लवको त्यस्तो सर्त स्वीकार गरेको देखिँदैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधि गर्दै हिँड्ने काम सरकारलाई सैह्य हुँदैन। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए सरकार वार्ताका लागि जहिल्यै तयार छ।’
विप्लवको पार्टी नेता सरकारले वार्तामा बोलाइदेओस् भन्नेमा छ। उसका कतिपय नेताहरूले सत्तारुढ दल नेकपाका कतिपय शीर्ष नेतालाई समेत भेटेर वार्ताको वातावरण बनाउन पहलकदमी लिइदिन आग्रह गरिरहेका छन्।
पछिल्लो पटक पनि विप्लवका नेता अनिल शर्माले कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेट गरेको पनि स्रोत बताउँछ। यी सबै भेटघाट वार्ताको वातावरण बनाउन भएको बताइएको छ।
थवाङ्गमा सम्पान्न ने.क.पा.को आठौँ महाधिबेशनले पार्टीभित्र फरक मत राख्न नपाउने नियमलाई पारित गरिसकेको अवस्थामा बेला बेलामा पार्टीभित्र देखिएका स-साना फरक मतहरुलाई रोकथुन गर्नुको सट्टा बेलैमा ध्यान दिएर समाधान गर्नु नै ने.क.पा.को हितमा हुनेछ। पार्टीभित्र मौलाएका गलत प्रवृत्तिलाई अझै प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्नु नितान्त आवस्यक छ। नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने केही आसेपासेहरुले सक्षम, इमान्दार र कर्मठ नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई नेतृत्वको नजिकै पर्न नदिने प्रबृत्ति बेलैमा रोक्नु अति आवस्यक देखिएको छ। पार्टीभित्र घुसेका सरकारी सुराकीहरूलाई कारवाही गर्न नसक्ने हो भने नेतृत्व कि त गोञ्जालो कि छे-ग्वेभारा बन्ने सम्भावना प्रबल छ। यसतर्फ नेतृत्वले बेलैमा सचेतता देखाउनु आवस्यक छ।
नेपालमा चलिरहेको एकीकृत जनक्रान्ति विगतको दश वर्षे जनयुद्ध जस्तो हैन। तर त्यस जनयुद्धका दौरान भए गरेका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने हिम्मत गर्नु पर्ने देखिन्छ। पार्टीले क्रान्तिलाई अघि बढाउने हो भने बैधानिक र खुल्ला मोर्चा संचालनमा बिशेष ध्यान दिन आवस्यक छ भने अबको क्रान्ति संचार माध्यमको सहभागिता बिना पुरा गर्न असम्भव छ। त्यसैले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले उपयुक्त संचार नीति बनाएर कार्यान्बयानामा जान अति आवस्यक छ। तब मात्र नेपालमा गरीब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी लगायत उत्पीडित वर्गको राज्यसत्त्ता प्राप्तिका लागि शुरु भएको एकीकृत जनक्रान्तिले सफलता पाउनेछ।
(२०७६ मंसिर ८, आईतवार) १३:४९ मा प्रकाशित